Maryan ma ahayn Masiixiyad! W/Q: Bashiir M Xersi | Laashin iyo Hal-abuur
Maryan ma ahayn Masiixiyad! W/Q: Bashiir M Xersi
Maryan ma ahayn Masiixiyad!
Salaan ka dib, ayaan waxoogaa is la qaadaadhignay arrinta, sababteeda iyo waxa ka dambayn kara. Waxaan ku qanciyey, in maadaama Dottoressa Maryan, Eebbe ha u raxmadee, ay noqotay qofkii ugu magaca iyo muuqa dheeraa dadkii ku geeriyooday qaraxaa, uu ujeedkoodu yahay, in ay dunida u tusaan, in ay ka mid eheed iyaga!
Waxaa la yaab leh, sida aan u noqonnay bulsho xumaha u faafisa si ka degdeg badan dab caws qabsaday.Ka sii darane, waxaan Illaa shalay arkayey, dad ku doodaya; naga hubiya, wuxu amay sax yihiin iyo waa laga yaabaa, in ay run tahay! Yaah!
Maloxun wax ka daran ma jiraan, ku ma sii jirto marka ay qof ama qoys taabanayso dareenkooda, dadnimadiida iyo durriyaddooda.Is ku aadka ugu adag, ee ay u sheegteen Masiixinnimada Maryan waa in warbaahinta dunidu si mug leh uga faalloodeen waxna uga qoreen, laga diyaarshay barnaamijyo maqal iyo muuqaal ah.
Warbixinta Newyorka times, oo ay Dottoressa Maryan ku tilmaameen (xidigtii soo baxaysay) oo miyeysan ahayn; gabar hadda qalinjebin leheed, oo caafimaad baratay?.
In ay eheed, qof gargaar iyo gacanqabad. Oo haddaa ma dhaqan Kiristanka keliya ay leeyihiinaa?.
In ay qaraabo yihiin nin Shabaabku dileen, oo adeer u ahaa. Qof magacaa leh, Dottoressa Maryan xigto la ma ahan. Kaba muhimsane, xilliga uu dhintay, Maryan carruur ayey eheed, marka ma jiri karin duruuf ay is ku baran kareen. Beenlow qof dhintay ama qof maqan ayuu marqaati ka dhigtaa.
Waa labo dhimasho; dhimashadii ajalleed, ee qarax diimeedku sababay iyo dhImashada labaad been sheegadka diimeed ah, oo magacdil u ah Maryan.Sidee ka la duwanaasho loo helayaa, haddiiba laga dhigay masabbid iyo been? Ka darane, sideen hafar iyo warxumo tashiil, uga hortagaynaa, haddii anagu aanba nahay kuwa faafinaya ama wareejinaya?.